” Misotro Cappuccino Ao Anatinà Burkina Iray Meva”: Burkina Faso Manome Voninahitra Ireo Tra-doza Tamin’ireo Fanafihana Tao Ougadougou · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2016 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Español, Français
Ny “Splendid Hotel” taorian'ireo fanafihana – Sehatra ho an'ny daholobe
Misaona i Burkina Faso.
Ny 15 Janoary 2016, nisy andian-jatovo nirongo fiadiana nanafika ny toerana fisotroana “Taxi Brousse”, ny toerana fisakafoana “Le Cappuccino” sy ny hotely “Splendid” tao afovoan'i Ouagadougou, renivohitr'i Burkina Faso, nahafaty olona 30 sy nandratra 56 hafa. Ny Al-Qaïda ao anatin'ny Maghreb islamique (AQMI) no nilaza ho tomponantoka tamin'ilay asa fampihorohoroana. Nolazain'ireo mpikambana ao amin'ny AQMI ho toy ny valifatiny amin'ireo tombontsoa frantsay taorian'ny hetsika miaramila tao Sahel tamin'ny 2012 no anton'ireo fanafihana ireo.
Ireo fanafihana tao Ouagadougou, avy amin'i Barmou Salifou tao amin'ny twitter (nahazoana alàlana)
Tra-doza tamin'ny fanafihana tao Ougadougou, avy amin'i Barmou Salifou tao amin'ny twitter
Hazavain'ny Kaomandà mitarika ny ady amin'ny asa fampihorohoroana ao Burkina fa tamin'ny fotoana nahatongavany teo amin'ny toerana, tonga dia tàkany avy hatrany fa tsy misy tokony hieritreretany raharaha fakàna takalonaina :
Ny hahafaty marobe no tanjon'izy ireo, ary tsy olana ho azy ireo ny ho faty. Tsy nisy azonay natao izay zavatra efa niomananay hatao. Voatery izahay nandray an-tànana ny fahaleman'ireo mpanjifa tao anatin'ny hotely ary nisoroka ny tsy hahavoatifitra azy ireo.
Mitantara ny helo niainany ireo sisa tsy maty. Manamafy indrindra indrindra i Yannick Sawadogo :
Tena nampihoron-koditra… feno rà izay rehetra jerena. Tena ampotomoty no nitifiran-dry zareo ny olona.
Vehivavy iray afaka tamin'ilay loza no mitantara ny zavatra hitany :
Iarahan'izao tontolo izao mizaka ny fisaonan'ilay firenena. Ety anaty tambajotra sôsialy, teboka iray mampifandray hanehoana ny firaisankinan'ireo mpampiasa aterineto miaraka amin'ireo fianakavian'ny tra-doza ny tenifototra #JesuisOuaga (OuagaAho).
Isan'ireo Burkinabés tra-doza ry:
- Pascal Kinda, filoha fahiny tao amin'ny Kaomity Nasionaly Olaimpika sy ny Fanatanjahantena Burkinabè, 70 taona :
Sary Pascal Kinda, filoha fahiny tao amin'ny Kaomity Nasionaly Olaimpika sy ny Fanatanjahantena Burkinabè maty tao amin'ny Splendid Hotel
- Ahmed Kere, 33 taona, mpandika lahatsoratra. Ity ny fanehoankevitry ny iray tamin'ireo vehivavy nàmany :
Andro mampalahelo tsy misy toy izany. Olona tsara iray, nàmana, no maty tamin'ny fanafihana mpampihorohoro teto #BurkinaFaso . Fitiavana hatrany no resahany, tsy niresaka fankahalàna velively. Mandria m-piadanana ry Ahmed Kere
- Simplice Armel Kinane, mpamono afo, 32 taona. Manome voninahitra azy ao amin'ny Facebook ny namany Eric Kabre:
Mandria am-piadanana, rahalahy. Ho ao anaty tsiaronay mandrakariva ianao.
- Jacqueline Lankoande, 40 taona, injeniera amin'ny resaka herinaratra.
Olona maha-te-ho tia sy sarokenatra no amaritan'ny namany an'i Jacqueline. “Na lalitra iray aza tsy sahiny ampijaliana“ hoy ry zareo.
Ao anatin'ity lisitra ity ireo sasany tra-doza fantatra hatramin'ny anio.
Nanambàra andro 3 ho fisaonan'ny firenena i Burkina Faso :
ny 17 hatramin'ny 19 Janoary no voatondro ho fisaonan'ny firenena
72 ora ho fisaonan'ny firenena. Tsy misy inona iarahana amin'ireny adala tsy misaina ireny. Tsy hahavita na inona na inona amin'ny firaisam-pirenena ry zareo.
Nampalahelo an'ireo Borkinabe mpampiasa aterineto ny tsy nahitàn'izy ireo fiaraha-mientana fanehoana firaisankina ho an'ireo tra-doza tamin'ny fanafihana tao Ouagadougou, toy izay hita tamin'ny fanafihana tao Parisy:
Misaona i Burkina Tsy mahita mihitsy aho hoe #MivavahaHoAniBurkina Tsy tokony hanavakavaka ny hirifiry Fisainana lalina ho an'i Burkina
Fa indrindra indrindra, nanao voady ny hijoro hatrany hatrany ry zareo Burkinabe hanohitra izay rehetra endrika fanaovana an-tendrony sy herisetra, tahaka izay asehon'ity sorabaventy ity, izay nifampizaràna be teny amin'ireo mpampiasa aterineto :
Ny valintenin'ireo Burkinabe ho an'ireo mpampihorohoro sy ireo mpanohana azy. #lwili – hita tao amin'ny FB
12 ora izayMediam-bahoaka